ကင်မရာကိုင်တဲ့ မှော်ဆရာ ( ရိုက်မယ် မျက်တောင်မခတ်နဲ့ ငြိမ်ငြိမ်နေ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကင်မရာကိုင်တဲ့ မှော်ဆရာ ( ရိုက်မယ် မျက်တောင်မခတ်နဲ့ ငြိမ်ငြိမ်နေ)
ကင်မရာကိုင်တဲ့ မှော်ဆရာ ( ရိုက်မယ် မျက်တောင်မခတ်နဲ့ ငြိမ်ငြိမ်နေ)
Posted by မှော်ဆရာ on Oct 27, 2011 in Creative Writing | 20 comments
Camera man zayamyonyunt
ကျွန်တော်က ရွာထဲမှာသာ ဟိုယောင်ယောင် ဒီယောင်ယောင် မှော်ဆရာ လုပ်နေရတာပါ ။ တကယ်တော့ မှော်ဆရာဆိုတာ ဓါတ်ပုံ ဗီဒီယို ရိုက်ကူးရေး လုပ်ငန်းကို အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအနေနဲ့ ယခုအချိန်ထိ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေရတဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ ။
အခုဆိုရင် ကျွန်တော် ကင်မရာကိုင်ခဲ့တဲ့သက်တမ်းက ၁၀ နှစ် နီးပါး ဖြစ်လာပြီပေါ့။ကင်မရာဆရာအနေနဲ့ မြို့ရော ၊တောပါ မကျန် ခြေရာခြင်းထပ်အောင် သွားလာ လှုပ်ရှားရင်း အမှတ်ရစရာ အဖြစ်တွေလဲ အများကြီး ရှိခဲ့ပါတယ် ။
ဒါကြောင့် ဗဟုသုတ အနေနဲ့ မဟုတ်တောင် ရွာသူ ရွာသားအပေါင်း အပျင်းတော်ပြေရုံလောက် အခန်းဆက် တင်ဆက်သွားပါမယ် ။
ဓါတ်ပုံပညာကို စတင်သင်ယူချိန်က ဆရာ့ ဆရာများက မှာကြားခဲ့ ပါတယ် ။ ဓါတ်ပုံရိုက်မယ်ဆိုတိုင်း အရိုက်ခံသူကို အသိပေးပြီးမှ ရိုက်ပါတဲ့ ။ ဘာလို့ဆိုတော့ တော်ရုံတန်ရုံက ကင်မရာနဲ့ ချိန်လိုက်ပြီဆိုရင် နဲနဲပါးပါးတော့ အိုးတိုး အန်းတန်းတော့ ဖြစ်သွားတာကိုး ။ ဒါကြောင့် အသိလေးပြန်ဝင်သွားအောင် ဓါတ်ပုံဆရာအနေနဲ့ စကားလေး ဘာလေးပြောပေးရပါတယ် ။အကောင်းဆုံးစကားက ရိုက်မယ် … မျက်တောင်မခတ်နဲ့ ….ငြိမ်ငြိမ်လေးနေ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဓါတ်ပုံရိုက်စဉ်မှာ အမှတ်တမဲ့ မျက်တောင် ခတ်မိတတ်တာကိုလဲ ကာကွယ်ပြီးသား ဖြစ်သွားတာပေါ့လေ …
စကားမစပ် …. ကျွန်တော်က မှော်ဆ၇ာ ဆိုပေမယ့် သူရဲတော့ ကြောက်တတ်တယ်ဗျ … ဒါကြောင့် အသုဘတို့ သေမှုသေခင်းဓါတ်ပုံတို့ ဆိုရင် ပိုက်ပိုက် ဘယ်လောက်ရရ ဝေးဝေးက ရှောင်ပါတယ်။ အသုဘ ဆိုရင်လဲ ငို၏ ယိုဟယ်နဲ့ စိတ်ညစ်ရလွန်းလို့ ၊ သေမှုသေခင်း ဓါတ်ပုံဆိုရင်လဲ သွေးထွက်သံယို ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်တွေကို သေသေချာချာ ပြူးပြဲနေအောင် ရိုက်ရတာ ထမင်းစားပျက်လွန်းလို့ပါ ။ ယုံကြမလားမသိဘူး အဲဒီ့သေမှုသေခင်း ဓါတ်ပုံက တစ်ပုံကို ငါးထောင်လောက် ဈေးပေါက်ပါတယ် ။ဒါကြောင့် မှုခင်းမသာတစ်လောင်း ရိုက်ရရင် ဓါတ်ပုံခတင် ၃ သောင်း မှ ငါးသောင်းအတွင်း မသာရှင်က ရှင်းရပါလိမ့်မယ် ။ ကျွန်တော်ကတော့ ဘာရယ်ညာရယ် မတွက်ပါဘူး ။ ရှင်းရှင်းပြောရရင် ကြောက်လို့ကို ပိုက်ဆံ ဘယ်လောက်ရရ ၊ မရိုက်တာပါ ။
ကဲ ဒီလောက်ဆို မှော်ဆရာ သတ္တိ ကောင်းတာကို သိလောက်ရောပေါ့ ။
အဲဒီလောက် ဝေးဝေးရှောင်တဲ့ မှော်ဆရာ တစ်ယောက် မလွဲမရှောင်သာ ရိုက်ရမယ့် အသုဘနဲ့ တည့်တည့်ကြီး ကို တိုးမိပါပြီ။
ကျွန်တော့ ကွန်ပျူတာ သင်တန်းမှာ တက်ခဲ့တဲ့ ယောင်္ကျားလေးတစ်ယောက် မိန်းကလေးကိစ္စနဲ့ ပိုးသတ်ဆေး သောက်သေသွားတာမှာ သူ့မိဘကိုယ်တိုင်က ဆရာရယ် ဆရာ့တပြည့်မိုက်ပါတယ်.. ဆိုပြီးငိုလိုက် ။ ဆရာသင်ပေးလိုက်တဲ့ ပညာတွေ ဘယ်နား သူ သွားသုံးတော့မှာလဲ ဆရာရဲ့ဆိုပြီး ငိုရင်းက သားလေးက ဓါတ်ပုံရိုက်နဲတယ်ဆရာ.။ သူရှင်တုန်းက ပါတ်စ်စပို့ကလွဲလို့ ဘာမှ မရိုက်တော့ အခုအလွမ်းပြေကြည့်စရာလေး သားအလောင်းကိုပဲ မှတ်တမ်းတင် ရိုက်ပေးပါဆိုတော့ ကျွန်တော်မှာ ဒုက္ခနဲ့ လှလှ နဲ့ကို တိုးရတာပါပဲ ..
ကျွန်တော်လဲ အရင်တုန်းကတော့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြပြီး ငြင်းနေကြပါ ။ အခုတော့ ငြင်းလို့ မကောင်းတဲ့ သူတွေ ဆိုတော့ အယောင်ယောင် အမှားမှားနဲ့ ကင်မရာ လေးလွယ်ပြီး လိုက်ခဲ့ရပါတယ် ။ လမ်းတလျှောက်တော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အားပေးရင်းပေါ့ ။ ““ ငါယောင်္ကျားပဲ ၊ ဘာကြောက်စရာရှိလဲ ၊ အလောင်းဆိုတာ ကိုယ့်ကို ဘာမှ လုပ်နှိုင်တာ မဟုတ်ဘူး ၊ မြန်မြန်ရိုက် မြန်မြန်ပြန်ရုံပဲ““ ဆိုပြီးတော့ပေါ့လေ …။
ဒီလိုနဲ့ အသုဘအိမ်ရောက်ပါပြီ . အိမ်ပေါ်ကို မရဲတရဲနဲ့ တက်လိုက်ရုံရှိသေးတယ် ““ အမလေး သားရဲ့ သားဆရာ ရောက်လာပြီလေ .. ဆ၇ာကို အိမ်အလည်ခေါ်ချင်တယ်ဆို .. ထခေါ်ပါဦးလား သားရဲ့ဆိုပြီး ““ သူအမေရဲ့ ငိုသံက လမ်းတစ်လျှောက်တင်းလာတဲ့ ကျွန်တော့စိတ်တွေကို အရေဖျော်လိုက်ပါပြီ …။အဆိပ်သောက်သေတာမို့လို့ ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် မဲပြာနေတဲ့ အလောင်းကလဲ ကို့ရှေ့မှာ ၊ အသုဘအိမ်ကလူတွေကလဲ သူ အမေငိုသံကြောင့် ကျွန်တော်ကို ၀ိုင်းကြည့်နဲ့ ကျွန်တော် ဘာလုပ်လို့ ဘာကိုင်ရမှန်းကို မသိတော့ပါဘူး ။
ဒါပေမယ့် စိတ်လေးတွေကို ပြန်စုစည်းရင်း လုပ်စရာ အလုပ်ကို ခပ်သွက်သွက် လုပ်ရပါတော့တယ် ။ အလောင်းကို ဘေးက နှစ်ပုံ အပေါ်က တစ်ပုံ မျက်နှာအကြိးတစ်ပုံလောက် ရိုက်ပေးပေမယ့် သူ့အမေက စိတ်မကျေနပ်သေးပါဘူး ။ သားနဲက ကျွန်မနဲ့ အတူတူရိုက်ပေးပါဆရာတဲ့ ။ ဟယ် ခက်ရပါပြီ ။ ပြန်ချင်ပါတယ်ဆိုမှ . ပြီးတော့ အလောင်းကလဲ ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် ပက်လက်ကြီး ၊ သူ့အမေကို သူ့သားအလောင်းဘေးမှာ အိပ်ခိုင်းပြီး ယှဉ်ရိုက်လို့ကလဲ မကောင်း ။ သူ့အမေကလဲ တစ်ဦးတည်းသောသားက ဒီလို ပိုးစိုးပက်စက် ဖြစ်သွားတာဆိုတော့ ဘယ်လို တရားချချ ရိုက်မယ်ပါပဲ ။ဘေးကလူတွေကလဲ ၀ိုင်း အချွန်နဲ့ မ ကြပါတယ် ။ရိုက်ပေးလိုက်ပါ ဆရာရယ်တဲ့ ။ သူတို့ မရိုက်ရတိုင်း …။ ရှိစေ ဘယ်လိုရိုက်ပေးရမလဲဆိုတော့ သားလေးကို ထူပေးပါ ။ ဖက်ရိုက်မယ်ဆိုပဲ။အလောင်းကြီးကို ၀ိုင်းထူပြီးတော့ ထိုင်လျှက်ဖြစ်အောင် အတင်းလုပ် ၊ပြန်လဲမကျအောင် နောက်က တစ်ယောက်က တွန်းထား ၊ သူအမေက ဘေးကနေ သားပခုံးလေး ဖက်ထားပေါ့ ။
အဲဒီလို စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ ရိုက်နေရတုန်းမှာတင် ဆရာစကားကို မြေ၀ယ်မကျ နားထောင်တတ်တဲ့ ကျွန်တော့ စရိုက် ပေါ်လာတာပါပဲ ။ လှုပ်တောင် မလှုပ်နှိုင်တော့တဲ့ မသာကြီးကို ကင်မရာနဲ့ချိန်ပြီး ကျွန်တော် ဘာပြောလိုက်တယ် မှတ်သလဲ ။““ ရိုက်တော့မယ် ၊ မျက်တောင်မခတ်နဲ့ ၊ ငြိမ်ငြိမ်နေ““တဲ့လေ
မသာတစ်အိမ်လုံး အသံလုံးဝ တိတ်သွားပြီး ကျွန်တော့်ကို အံ့သြတကြီး ၀ိုင်းကြည့်နေကြပါတယ် ။ သူ့အမေဆိုတာ အငိုတောင်ရပ်သွားပြီး ကျွန်တော့်ကို ပြူးတူးကြောင်တောင်လေးနဲ့ ကြည့်လို့ပေါ့ ၊ ကျွန်တော်လဲ ကိုယ်စကားမှားသွားတာကို သိပြီး ဘယ်လို ပြန်ပြောရမယ်တောင် မသိတော့ပဲ ကင်မရာချိန်ရက်သား ငုတ်တုတ်ကို မေ့နေပါပြီ ။
အဲဒီ့အချိန်မှာ ကယ်တင်ရှင် ပေါ်လာပါတော့တယ် ။ တခြားသူ ဟုတ်ပါရိုးလား ။ အလောင်းကို နောက်က တွန်းထားရတဲ့သူပေါ့ ။ သူက အလောင်းကို နောက်က တွန်းရင်း သူ့ပုံမပါအောင် ကွယ်နေရတာဆိုတော့ သူ့ကို ပြောတယ် ထင်ပြီး ““ ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတဲ့ ““ ။
အမယ်ငီး ၊ တော်ပါသေးရဲ့ ၊ အဲဒီ့ဆ၇ာသာ မကယ်ရင် ဘယ်လို ပြောရမယ်မသိ ။ ကျွန်တော်လဲ အင်း နောက်တစ်ပုံ ရိုက်ရင်တော့ ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ ပြောမယ့်သူ ရှိမှာ မဟုတ်တော့ဘူး ဆိုပြီး အရှက်မကွဲခင် ကင်မရာဆွဲပြီး အသုဘအိမ်မှ အမြန်ပြန်ပြေးလာခဲ့ရပါကြောင်း ။
ဂွဒ်တယ်ဗျိုး စာဖတ်ရတာ ကျနော်ဒို့ဆီမှာတော့ အသုဘ ကိုဓတ်ပုံရိုက်လေ့မရှိဘူး(အကဲရွေ နာမည်ကြီး များသေရင်တော့ဗီဒီရိုပါရိုက်ကြတယ်)ကျနောယောက်ခမကြီးဆုံးပါးသွားတော့ ကျနော်က(ကျေးဇူးရှင်မို့လို့)မှတ်တန်းတင်တာ သူများနဲ့အမြင်မတူတော့ ကိုယ်ဘာသာကိုယ်ရိုက်တာတောင်အူကြောင်ကြောင်ဂျီး တမျိုးစီပေါ့ဗျာ
အင်း နောက်တစ်ခါ မှတ်မှတ်ရရ အသုဘကို ဗီဒီယို ရိုက်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းလေးကို ရေးပြဦးမယ်ဗျာ …
နယ်ဘက်တွေက သာရေးဆိုရင်သာ ဗီဒီယို ဓါတ်ပုံ ရိုက်တာဗျ …. နာရေးကြတော့ မရိုက်ကြဘူး …ကျွန်တော်ကတော့ ရှားရှားပါးပါး ရိုက်ဖူးလိုက်တာပါ
နောက်မှ အကြောင်းစုံရေးပြဦးမယ်ဗျာ ….
ငိုရအခက်..ရီရ အခက်ဘဲ မှော်ဆရာရေ..
နောက် အတွေ့ အကြုံလေးတွေလဲလုပ်ပါဦး..
မော်ဒယ်က ပြောစကားနားထောင်တယ်နော်။ ;)
မော်ဒယ်ကတော့ ပြောမနေနဲ့ မမရေ …
ကျွန်တော့ရှေ့မှာ တုတ်တုတ်တောင် မလှုတ်ဘူး .. ဟီး ဟီး အသက်မှမရှိတာ ဘယ်လှုပ်မလဲ
နောက်တစ်ခါဆိုရင် ပထမဆုံးအကြီမ် ဆက်ဆီပုံ ရိုက်တုန်းက အကြောင်းလေးကို ရေးပြပါဦးမယ် …
ဒီလိုပဲလုပ်နေကျ အလုပ် ပြောနေကျအပြောကို
မလိုအပ်တဲ့နေရာမှာ ယောင်ပြီး ပြောတတ်တယ်ဗျ
အရင်က ကျုပ် ဆိုအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ယောက်နဲ့ စကားပြောရင် အမေ..အမေနဲ့ ယောင်ခေါ်မိတတ်တာ
အမလေး… အလောင်းကို ဖက်ရိုက်ရတယ်လို့ .. … အီး…အမေဆိုတော့လည်း ၀မ်းနည်းလွန်းတော့ … စိတ်ထဲဖြေသာအောင် လုပ်ရှာတာနေမှာ …… ငိုအားထက် ရီအားသန်ဆိုသလိုပဲ ….
အဲ့လိုရိုက်ပြီး မထုတ်ခင် skin tone ကော ပြန်ကိုင်ပေးလိုက်ရသေးလားဗျ …
ကျနော် ဆိုရင်တော့ ကိုင်ရဲမှာ မဟုတ်ဝူး..
ပြောရင်း အသည်း ယား ထှာ ….
စကင်းတုန်း ကိုင်ဖို့နေနေသာသာဗျာ …
ခရောပင်း တောင် မချနှိုင်တော့ပါဘူး ….
ကူးတဲ့ဆိုင်ကို အလင်းအမှောင် ကြည့်ကူးလိုက်ပါဗျာ ဆိုပြီး
တန်းကို အပ်လိုက်ရတာပါပဲ …
““ သားလေးက မျက်လုံးမှိတ်နေတယ် ၊ ဖွင့်ပေးပါဦး ဆရာလို့ ““ လာမပြောလို့ …
ဘာတဲ့ ရှင်တုန်းက ဒါ့ပုံအရိုက်နည်းခဲ့လို့ ဆိုလား …
ရွာသူရွာသားအပေါင်းလည်း ဒါမျိုး မဖစ်ရအောင် မသေခင် ဒါ့ပုံများများ ရိုက်သွားကြပါလို့
(ဒါ့ပုံဆြာ) ပီပီ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါသည်ခင်ည …
ရွာထဲက ဒါ့ပုံဆြာတွေနဲ့ ရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ ယောက်ျားလေးများကို ကျားကျားယားယားရှိတဲ့ ကိုစိန်သော့ကြီးမှ
ရှောပီးသွားမှ ရိုက်ချင်ရင်တော့ အတွေ့အကြုံရင့် မှော်ဆြာ မှ လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးမှာဖစ်ပါတယ်ဗျ…
တားကတော့ အသက် ၁၈နှင့် ၂၅ကြား စကီလေးတွေပဲ သီးသန့် ကန့်သတ် ပီး …ကိုယ်ဖိ ရင်ဖိ နှင့် အသွေးထဲ အသားထဲ မှ စိတ်ပါလက်ပါ အားပါးတရ မဟားဒယား ရိုက်နှက်ပေးမှာ ဖစ်ကြောင်း. …မောင်းခတ်လိုက်ရပါသည် ခင်ဗျား
Guy Inz@ghi for GIRL only fotografy
အောင်မလေး နစ်နာနေပါဦးမယ် …. အင်ဇာဂီရယ် …
ဒါမှ တစ်ကယ်လက်တွေ့ကျတဲ့ cameraman ဘဝပဲဗျို့။ နောက်အတွေ့အကြုံတွေလည်းစောင့်ဖတ်နေပါတယ်။
ကိုမှော်ဆရာ ဇာတ်လမ်းက တကယ့်ကို ငိုအားထက် ရီအားသန်
ဆိုသလို ဖြစ်နေတာပေါ့။ နောက်ထပ် အတွေ့အကြုံတွေလဲ ရှိသေးမယ်
ထင်ပါတယ် .. ဆက်ရေးပါဦး ….
မသာ က မျက်လုံးထမဖွင့်လို့ :D
ဟား ဟား ဟား ကိုမှော်ဆရာရဲ့ အဖြစ်ကလည်း … တကယ့်ကို အမှတ်တရပါပဲနော် … ။ အတွေ့ကြုံဆန်းလေးကို ရယ်စရာလေး နှောထားတာ … ရွာသားတွေ ဖတ်ပြီး ပျော်ကြရပါတယ် … ။
သူ့အမေနဲ့တွဲရိုက်တုန်း ပြောမိတာမို့လား … ဒါဆိုလည်း အန်တီ မျက်တောင်မခတ်နဲ့လို့ ထပ်ပြောလိုက်ပေါ့ ဟီးဟီး … ။
အဲ့ဒီလို ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်တွေမြင်ရလျှင် ကျွန်မကတော့ မကြောက်ပေမယ့် အန်ချင်ပါတယ် …. ။
ဘဲဖုန်းထဲကို ကြည့်လိုက်လျှင် အဲ့ဒီလို ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်ပုံတွေချည်းပဲ …. ။ သူ့အလုပ်နဲ့ ဆက်စပ်နေတော့ ရိုက်ထားပေမယ့် … ကျွန်မကတော့ မြင်ရတာနဲ့ အန်ချင်လွန်းလို့ …. တစ်ခါတစ်ခါ သူ့ဖုန်း ယူ စစ်ရမှာတောင် တွန့်နေမိတယ် … ။ တစ်ခါတစ်လေ .. ဓါတ်ပုံတင်မကဘူး… ဗီဒီယိုဖိုင်တောင် ရိုက်ထားလိုက်သေးတယ် … ။ သူတို့ကတော့ … လူသေဆိုတာ ရိုးနေပြီတဲ့လေ
ရိုက်တော့မယ် ၊ မျက်တောင်မခတ်နဲ့ ၊ ငြိမ်ငြိမ်နေ… ဆိုတော့ လူသေကောင်က မျက်တောင် တဖျက်ဖျက် ထ ခတ်နေသလိုပဲ.. ဟိဟိ အပမှီတာတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး အမိမှီထားလို့ ဖြစ်မယ်။
အားပေးသူများလို့ ရေးရတဲ့သူ အားရှိပါတယ် …
နောက်နောင်လဲ ဆက်လက်အားပေးကြပါကုန် ….
မှော်ဆရာ ကောင်းမှု နဲ့ ဈေးနှုန်းလေးတွေပါ စုံနေအောင် သိပြီး ပြုံးရယ်ရတယ်ဗျို့ ။
ကိုကုလားကြီး ဖတ်ပြီးမှ ဒီဟာပြန်လာဖတ်ဖြစ်တယ်
မှော်ဆရာမှာ ဒီလိုအတွေ့အကြုံသစ်တွေ အများကြီး ကျန်လောက်သေးတယ်